एजेन्सी । विकसित देशहरुमा सहरी सार्वजनिक यातायातको सबैभन्दा प्रचलित माध्यम बनेको मेट्रो रेलमा अनेक खालका सुविधाहरु प्रदान गरिन्छ । रुसको मस्कोमा रहेको मेट्रो रेलले चाहीँ गज्जबको अफर चलाइरहेको छ । अहिले सोसल मिडियामा भाइरल......
एजेन्सी । शारीरिक कसरतले शरीरको क्यालोरी बर्न गरेर शरीर र मन सन्तुलित राख्ने हामी सबैलाई थाह छ। शारीरिक व्यायाम व्यक्ति आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ। जस्तो कि मुटु स्वस्थ राख्न, कार्डियोभास्कुलर मुभमेन्ट जस्तै दौडने, पौडीखेल्ने गर्नुस्। यी......
काठमाडौं, १३ असार । चिकित्सा आन्दोलनमा सक्रिय डा. गोविन्द केसीले सबैखाले गलत र अनियमित गतिविधिहरु तत्काल रोकेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक सम्झौताअनुसार सुधार नभए कडा संघर्षमा जाने बताएका छन्। डा. केसीले सरकारको माफियामोहका कारण विगतमा......
काठमाडौं ९ असार । सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका पुत्र प्रकाशले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर गाउँलेको मन जितेका छन्। विप्लवका छोरा डा. प्रकाश चन्दले कपिलवस्तुको शिवगढीमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर गाउँलेको......
यस्तो पो नेता, ‘दिउँसो राप्रपा प्रवेश, साँझ बिरामीको सेवा’
काठमाडौं, ५ असार । उज्वल विक्रम थापा निरन्तर सामाजिक काममा खट्ने एक अभियन्ता हुन्। उनलाई धेरै जसो अस्पताल वरपर भेटिन्छ। उनी अस्पतालमा उपचार अभावमा छटपटाइ रहेका बिरामीका लागि कहिलेकाहिँ संजीवनी बुटी बनेर उदाउँछन्। आर्थिक......
काठमाडौं, ३ असार । समता अस्पताल बौद्धमा कार्यरत एक कर्मचारीले आत्महत्या गरेपछि आफन्तहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। रामेछाप दोरम्बाकी २७ वर्षीया विमला तामाङले अस्पतालभित्रै आत्महत्या गरेको विषयलाई लिएर आफन्त आन्दोलित भएका हुन्। महानगरीय प्रहरी परिसर......
काठमाडौं, २ असार । चार दिनअघि ओम अस्पतालमा पित्तथैलीको पत्थरीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएकी महिलाको सहमतिपछि शव उठेको छ। आइतबार पीडित पक्षलाई अस्पतालको तर्फबाट मृतकप्रति समवेदना प्रकट गर्दै तिर्न बाँकी रकम मिनाहा गर्ने सहमति......
काठमाडौं । समाजमा सम्मानित र राम्रो व्यक्ति कहलिनको लागि मानिसले धेरै कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि ख्याल नगरी नहुने कुरा हो– रिस । मानिसले हरेक काम, व्यवसाय र गतिविधिमा रिसलाई आफ्नो वशमा......
पटना, ३१ जेठ । उत्तरी भारतमा धेरै लिची खाएका कारण पछिल्लो तीन सातामा ४७ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । बिहारका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएअनुसार सुक्ष्म इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोमका कारण ती बालबालिकाको ज्यान गएको हो ।......
काठमाडौं, २९ जेठ । त्रिवि टिचिङ अस्पतालको ५०६ नम्बर बेडमा सुतिरहेकी ३३ वर्षीया पुर्नी शाहीलाई उठ्न बस्न सहयोग गरिरहेका छन्, उनका श्रीमान सुरेन्द्रले । पुर्नी आफैं बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएकी होइनन् । उनी......
चिनी पनि चुरोट जत्तिकै हानिकारक !
बीबीसी । ब्रिटेनमा सन् २००७ मा धूमपान प्रतिबन्धित गरियो। त्यसको एक दशकपछि सामान्य खोल राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो। त्यो सबै मानिसहरूलाई चुरोट खानबाट निरुत्साहित गर्न गरिएको हो। चिनी पनि चुरोट जत्तिकै हानिकारक छ। ब्रिटेनमा......
मुटुको शल्यक्रिया जहिले पनि चुनौतीपूर्ण र जोखिम युक्त हुन्छ । तर एउटा नयाँ केस आएको छ जसले कल्पना नगरिएको जोखिम निम्त्याउन सक्छ । भिएनामा भएको सम्मेलनको क्रममा प्रस्तुत गरिएको जानकारीमा एक व्यक्तिको मुटुको शल्यक्रिया......
धरान । धरानस्थित विपी कोइराला स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डेङ्गुका बिरामी बढेका छन् । तीन सातायता ५० बिरामीले उपचार गराइरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाका अनुसार पछिल्लो समयमा फेला परेका सङ्क्रमित धरान–८ र १५......
कनकाई । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरुङ्गाको लापरवाहीका कारण सेवा लिन आउने बिरामी समस्यामा परेका छन् । स्वास्थ्य केन्द्रमा अव्यवस्थित प्रसूति सेवाकक्ष साथै आवश्यक सामग्रीको अभाव भएकै कारण सुत्केरी अवस्थाका महिला यसको शिकार भएका हुन्......
काठमाडौँ, २३ बैशाख । सवारी दुर्घटनाको एक कारण लागु पदार्थ सेवन (लापसे) रहेको पाइएपछि प्रदेश नम्बर २ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले लापसे जाँच अभियान चलाएको बताएको छ । लागु पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने चालकको......
लमजुङ, १३ वैशाख । सरकारी कार्यालयका प्रमुखले रक्सी, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नगर्ने शपथ लिएका छन् । उनीहरूलाई जिल्ला न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्यले बिहीबार शपथ खुवाएका छन् । लमजुङको बेंसीसहरस्थित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयअघि धूम्रपान र......
मुस्ताङ । मुस्ताङको बोक्सीखोलामा चौंरीको आलो रगत खाने मेला सुरु भएको छ । मुस्ताङका विभिन्न ठाउँहरुमा बर्सेनि रगत खाने मेला आयोजना हुदै आएको छ । यस मेलामा चाैंरीको रगत खान स्थानीयको ठूलो भिड लाग्नेगर्छ......
काठमाडाैँ । धेरै मानिसमा सुत्दा घुर्ने बानी हुन्छ । निदाउँदा आफु घुरिरहेको छु भन्ने उनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन । घुर्ने बानीले सँगै सुत्ने साथीलाई निदाउन समस्या हुन्छ । आफुभन्दा पनि अरूलाई बढी असर पार्ने......
काठमाडौं, चैत २७ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हरेक प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाएको मन्त्रालयका सहसचिव डा विकास देवकोटाले जानकारी दिएका छन । हाल......